မိုးမခလူကြီးများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 71
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၃၊ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း နောက်ဆက်ပြီး မေးချင်တဲ့မေးခွန်းက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ဆရာ။ ပါတီ မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄၈ ဦး စာရင်းတင်လိုက်ပြီ။ ပါတီကိုယ်တိုင်ကလည်း ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့အသစ်ကို ထူထောင်လိုက်ပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွေ ထွက်နေပြီ။ ၂၀၁၁ နှစ်မကုန်မီကနေ အခု ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်း ၂လပိုင်းမှာတင် အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြစ်လာတယ်။ ကြားထဲမှာ မတ်လ တလပဲ ရှိတယ်။ သိပ်မကြာခင် ဧပြီလဆန်းမှာ လက်ရှိအစုိုးရ စီစဉ်ပေးတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဖြတ်သန်းကြရတော့မယ်။...
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၂၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန် ပြည်ထောင်စုနေ့ နှစ်ပတ်လည်နဲ့တဆက်တည်း မေးချင်တာကတော့ တိုင်းရင်းသားမြန်မာပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရဲ့ နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှု ရေချိန်ဟာ တက်ကြွအားကောင်းနေပြီလို့ ပြောကြတယ်။ မြင့်မားလာတယ်။ အဆိုးမြင်စိတ်တွေထက် အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို မြင်တွေ့နေရတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား ခင်ဗျာ။ ကျနော် အရင်တပတ်က မန္တလေးကို ခရီးသွားခဲ့တယ်။ အယင်ကဆို တလျောက်လုံးမှာ ကျနော်က ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးမှာ နစ်နေတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ နစ်နေတယ်လို့ ပြောရမယ်ဗျာ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာမှ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အာဘော် ပါတီစာစောင်လေး ထုတ်ဝေတဲ့ဆီမှာ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့သားတွေနဲ့ ၀ိုင်းပြီးလုပ်ကို်င်ဖြစ်တဲ့ဆီမှာမှ ပြည်သူတွေရဲ့...
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၁၊ ပြည်ထောင်စု ပြည်ထောင်စုနေ့ ၆၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အားလုံးအတူတကွ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး အခြေအနေ၊ အလားအလာကို ဘယ်လို ပြောချင်သလဲ ဆရာ။ အရင်တုန်းကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စစ်အစုိုးရတွေကြားမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေပဲ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကာလတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ တုိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ သေနတ်သံတွေ တိတ်နေတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တကွ ပြည်ထောင်စုကြီးတခုလုံးက လိုလားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နို်င်ငံရေးအရ အဖြေရှာရေးဆိုတာတွေအတွက် အဖြေမဟုတ်သေးဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူ ကျနော်တို့ အင်န်အယ်ဒီပါတီအပါအ၀င်...
“ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၀) – Mar Mar Aye – 410
မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ No tags for this post. Related posts No related posts.
> လွှတ်တော်ထဲဝင်ကြရမယ့်အချိန်၊ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊၂၀၁၂ မေး။ ။အခုအချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး လွှတ်တော်ထဲကနေလုပ်ကြရမယ်လို့ ပြောရတော့မယ့်အချိန်လား။ ဖြေ။ ။ အခုအချိန်မှာက ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်နေတယ်။ ၀င်ပြီး အရွေးခံမယ့် လူဦးရေနည်းတာ များတာက ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အရေးကြီးတာက ရွေးကောက်ပွဲ ပုံသဏ္ဍန်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြဖို့လိုမယ်။ အခုအခြေအနေမှာက ပါလီမန်အတွင်းမှာပဲ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အရေး လုပ်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။ ပါလီမန်ပြင်ပကနေပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာထက် ပါလီမန်အတွင်းဖက်လုပ်ဖို့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ အတွင်းကနေပြီး လုပ်ရမှာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဝိဥာဏ်နဲ့နိုင်ငံရေးအသိနဲ့ လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဒီမိုကရေစီထိုးစစ်ဆင်ဖို့ လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ အဲသည်အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်လာပြီ။ကျောင်းသားတွေကလည်း ထိုးစစ်ကို ပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ ၀န်းရံကြမယ်လို့ ပြောဆိုလာကြပြီ။အဲသည် ဒီမိုကရေစီထိုးစစ်အတွက်...
> ၂၀၁၁ အပြောင်းအလဲများ၊အငြင်းပွားစရာများ ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာ အဓိကမေးဖြစ်တာကတော့ ၂၀၁၂ နှစ်သစ်သို့ မကူးခင် ၂၀၁၁ နှစ်အတွင်းမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုတွေဆီ ဦးတည်နေပြီလား၊ ဘယ်လိုမျိူး သဘောထားပါသလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာက ပြန်လည်ဖြေကြားရာမှာ … ဖြေ။ ။ ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ မြင်နေရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ တဖက်ကလည်း မပြောင်းလဲသေးတာတွေလည်း တွေ့ရှိနေရတုန်းပဲ။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်ဟာ အပြောင်းအလဲတွေကြားထဲမှာ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိနေသေးတဲ့ နှစ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ မေး။ ။ပထမအပြောင်းအလဲက ဘာလဲဆရာ။ ဖြေ။ ။ပထမဆုံးကတော့ ၂၀၁၁ မတ်လမှာ ဦးသိန်းစိန်အစုိုးရ တက်လာတယ်။ သန့်ရှင်းသောအစိုးရဖြစ်ရေးဆိုတာတွေ ပြောလာတယ်။ သန့်ရှင်းသောအစုိုးရဖြစ်ရေးအတွက်မီဒီယာတွေကစတင်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေ စတင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပြောလာတယ်။...
> သမဂ္ဂစိတ်ဓာတ်နဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊၂၀၁၁ မြန်မာပြည်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်တွေထဲက၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အစုအဖွဲ့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေအကြောင်း ယခင်တပတ်က ပြောဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်မှာတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော် (ကျဆုံးခြင်း)၇၃ နှစ်မြောက်နေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့မြင်ကွင်း၊ မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့်နဲ့ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်က သမဂ္ဂကျောင်းသားများ၊ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ဆက်ခံပွဲအကြောင်းကို မေးဖြစ်ပါတယ်။ မေး။ ။ဗိုလ်အောင်ကျော်နေ့မှာ သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်က ဗကသအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်တဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်တယ်။ ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း တက်ရောက်တယ်။ဗိုလ်အောင်ကျော်နေ့ အခမ်းအနားတင်မဟုတ်ဘူး၊ ကျောင်းသားအာဇာနည်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲ၊သမိုင်းတာဝန်ဆက်ခံပွဲလို့လည်း အမည်ပေးထားတော့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၀၇ နဲ့ နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်သစ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တဲ့ ပွဲမျိူးဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ဆရာ့အမြင်ကိုပြောပါဦး။ ဖြေ။ ။ ကျနော့်အမြင်ပြောရရင် ဖိတ်စာထဲမှာက ယခင်ကလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများတို့၊...
Page 71 of 78«1...6970717273...78»
Interview with U Win Tin - Can we make friends with 600 political prisoners
U Win Tin - We will be Political Force in Solidarity of Burma